Dr. Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab) oo ah siyaasi si weyn looga yaqaano Puntland, xilal kala duwanna kasoo qabtay xukuumadihii ka horeeyey midda hadda jirta ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Cabdiraxamaan Maxamed (Faroole), ayaa shaaca ka qaaday in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha.
Waraysi uu siiyey qaar kamid ah warbaahinta maxaliga ah, ayuu ku sheegay in ay ka go’an tahay in uu doorashada soo socota ka qayb galo, islamarkaana rajada uu qabaa ay tahay mid aan yareyn.
“Anigu musharrax baan ahay, waxan u ahay xilka madaxweyne nimada. In aan tartamo ayaan rabaa. Rajo badanna waan qabaa, waayo anigu eed hore ma gelin” Dr. Gaagaab ayaa warfidiyeenada u sheegay.
Mar wax laga weydiiyey barnaamijkiisa siyaasadeed iyo waxyaabaha hadii la doorto uu xoogga saari doonana waxuu yiri: “Barnaamijkeyga waxan soo bandhigi doonaa wakhtiga doorasahda la iclaamiyo, haseyeeshee waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ah: xasilinta nabad gelyada, mashaariicda taagan in horay loo wado, dimuqraadiyeynta, dhaqaalaha iyo soo celinta gobolada maqan”
Isagoo ka jawaabayey su’aal la waydiiyey oo ahayd sababta uu xisbi siyaasadeed u furan waayey iyo waxa ka jira in isaga iyo siyaasiyiinta la midka ahi aysan ku kalsooneyna nidaamka dimuqraadiga ah waxaa hadaladiisi kamid ahaa.
“Anaga kalsooni la’aani nama hayso, anaga keliyana ma ahan cidda leh doorashooyinku sidoodii hore ha u dheceen, cidda baqeysaa anaga ma ahan”.
Dr. Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab) wuxuu horay maamulka Puntland uga soo noqday: madaxweyne ku-xigeen, wasiirka maaliyadda iyo xildhibaan ka tirsan galaha wakiilada.
Horay waxaa u sheegay in ay u tartami doonaan xilka madaxtinimada ee Puntland, siyaasiyiin ay qaarkood horay Puntland xilal kala duwan uga soo qaybteen, ayna kamid yihiin: Gen. Cabdilaahi Siciid Samantar, Maxamed Cabdiqaadir (Dheel) iyo Cabdiraxmaan Maxamed Gablax.